Kedu ihe bụ njem ịchụ nta? | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Ebe njegharị
Yoù ma ihe ọ bụ ịchụ nta njem? O bu ihe siri ike isi na aha ahu puta ma oburu na m kwue maka anumanu na mmadu… getting na enweta echiche a?
Chụ nta njem bụ ịchụ nta njem. Ikekwe ọ bụghị nke kachasị ewu ewu taa ma ọ bụ nke nwere akwụkwọ akụkọ kachasị mma, n'eziokwu ọnwụ abụghị ihe na-atọ ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ dị adị enwere ọtụtụ akụkụ ụwa na-enye ya ma na-ebi na ya.
1 Chụ nta njem
2 Ebe a na-eme njem ịchụ nta
3 Untingchụ nta njem nlegharị anya na Spain
Chụ nta njem
Nke a bụ aha njem nlegharị anya nke metụtara ịchụ nta na nke na-akpali ọtụtụ puku mmadụ, ọtụtụ n'ime ha bara ọgaranya, gburugburu ụwa. Ọ bụ iwu na ndị na-eme ya ga-agbaso iwu na ụkpụrụ na-atụgharị uche na ya.
N'ezie, enwere ndị na-emebi iwu ma na-egbu anụmanụ ndị sitere na ụdị echedoro ma ọ bụ ndị na-eme ya n'oge na-adịghị anya, mana nke ahụ bụrịrị mpụ. Mgbe a na-eme njem nleta na iwu ọbụna ọ na-enyere aka ichekwa ụdị na ịdị ndụ nke obodo ndị dị na mpaghara ndị a.
Chụ nta njem ọ bụ ụwa niile ya mere anyị hụrụ ya site na United States, site na South America na Spain ruo Croatia. Ikekwe ị nwere safaris na Africa karịa n'uche ma ị ga-ahụ na ịchụ nta egwuregwu, nke mgbe ihe niile gbasara, na-eme ebe niile.
Enwere ezigbo ihe eji eme njem nlegharị anya nke ahụ na-elekọta lọjistik, ikike na ihe niile dị n'usoro nkwado ma ọ bụghị n'ihe egwu. Ndị ọkachamara na-ekwu na ịchụ nta bụ ihe dị mkpa na ọnọdụ anyị yana na e nwere ụfọdụ ọmarịcha na nkà na ya ịhapụ ya n'akụkọ ihe mere eme n'oge na-adịghị anya.
Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa na-ele njem ịchụ nta anya n'ime egwuregwu ndị njem ọ na-ekwusi ike na nkwado nke gburugburu ebe ọ bụ na, dịka n'ụdị njem ndị ọzọ, onye ahụ na-akpakọrịta na okike.
Ọ bụghị maka ịga ije na ịzụta ihe ncheta ọ bụghị mmadụ niile nwere ego egwuregwu a pụtara. Karịsịa ma ọ bụrụ na egwuregwu gị bụ ịchụ nta egwuregwu buru ibu ma ị ga-agarịrị Africa… Ma na obere ihe ma ọ bụ na obere ọkwa ọ bụ egwuregwu a nwekwara ike ịme na mpaghara, ime obodo ma ọ bụ mba ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ gburugburu ụwa.
Lee ihe dị mkpa bụ ọnụnọ nke Ọchịchị mgbe ọ bịara n'usoro iwu n'ihi na anyị maara na ọ bụrụ na ọ gbughị ya, ihe ga-eme na mbụ ga-eme: njedebe nke ụdị. Na a egwuregwu egwuregwu ịchụ nta mmetụta bụ ndị na-abụghị na ọbụna a na-ejikarị achịkwa ọnụ ọgụgụ nke ụdị ụfọdụ ọ bụrụ na ha gafee ọnụ ọgụgụ ụfọdụ, ha ga-awakpo ndị ọzọ.
Ọnụnọ nke steeti bụ n'ezie site ikike, na idozi oge ịchụ nta, nke ikike na njikwa nke ụlọ ọrụ ndị na-enye ọrụ ịchụ nta a.
N'ụzọ bụ isi dividedchụ nta njem na-ekewa n'ime obere egwuregwu, nnukwu egwuregwu na mmiri egwuregwu. Abụọ ndị mbụ na-ezo aka na mmiri dị na dams na nke abụọ na gburugburu ebe a na-eme ya. Obere egwuregwu gunyere oke bekee, nduru nduru ma ọ bụ partridge, dịka ọmụmaatụ. Nnukwu egwuregwu gụnyere anụ ọhịa, mgbada, na aquatic ịchụ nta na webbed na wader waterfowl.
N'aka nke ọzọ anyi nwere Ahịa e mepụtara karịsịa maka ndị njem nleta na-enwe nnukwu ego, na-achọ ebe obibi na ọrụ, ọzọ maka ndị na-achụ nta egwuregwu pụrụ iche na nke atọ ọkara-abụghị.
Ndị dinta egwuregwu pụrụ iche na-agagharịkarị na otu ndị ahọpụtara na-aga ịhọrọ ọnọdụ iji chọọ ụdị ahọpụtara. Ìgwè nke ikpeazụ enweghị ego ma ọ bụ ọtụtụ ihe ha chọrọ ma ọtụtụ oge ha anaghị ego otu ndị njem ma gaa onwe ha.
Ebe a na-eme njem ịchụ nta
N'Africa, n'ezie. Nnukwu kọntinent a bara ọgaranya bụ ebe mbụ na-abịa ma nwee ezi ihe kpatara ya. Enwere mba ndị Africa nwere anụmanụ, ha onwe ha na-ahazikwa safaris nke nwere ike ma ọ bụ ghara ịchụ nta, nke dị oke ọnụ ma bụrụ naanị ya, dị ọnụ ala karịa ma dị mfe. Mgbe ụfọdụ, ha na-achụ nta na oge ndị ọzọ ọ na-abụ nnụnụ na-ekiri njem nleta.
Ana m ekwu maka Tanzania, Cameroon, Namibia. Ana m ekwu maka ọdụm, enyí, ele, mgbada, atụ, agụ iyi, azụ. Mgbe ụfọdụ ọ gụnyere ịme egwuregwu ahụ na mgbe ụfọdụ iji ntuziaka pụrụ iche na-amụ ya. A ga-edozi ikike wee rapara na ego a pụrụ ịchụ nta ma ọ bụ ụbọchị edepụtara maka ịchụ nta n'onwe ya.
Africahapụ Africa Argentina Na South America, ọ bụrụla ebe ịchụ nta maka njem nleta. Ndị Pampas na ndịda Patagonia na-enye nke ha na anụ ọhịa, atụ, nduru, ọbọgwụ, ewu, pumas ma ọ bụ antelopes. Ọzọ n'ebe ugwu Mexico na-enye ịchụ nta nke jaguar ma ọ bụrụ na anyị anọgide na-arị ugwu ha bụ Canada na United States.
Bears, anụ ọhịa buru ibu, anụ ọhịa wolf, na bison America bụ ọkacha mmasị na North America na ndị ọzọ Alaska polar bear na obere akàrà na-achụ nta. N'ezie, Canada na-enye ikike ịchụ nta ihe karịrị puku iri atọ na ụmụ aka akara na lynxes na-enweghị ebugharị ntutu.
Na mpaghara Asia Pacific mpaghara mara mma nke New Zealand na Australia Ọ ghọkwala ebe ndị njem na-achụ nta na-achụ nta na ndị dinta na-aga ebe ahụ ịchọ mgbada ma ọ bụ mgbada.
Untingchụ nta njem nlegharị anya na Spain
Untingchụ nta nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na ihe dị iche iche nke ihu igwe ya na ọdịdị ala ya dị iche iche dị iche iche, nke ọ bụla nwere ụdị nke ya. Ọ dị ike karịsịa n'ime ime obodo, mpaghara ndị pere mpe n'ihi na ha kwagara n'obodo ukwu.
Mpaghara ụfọdụ agbanweela na ịchụ nta njem nleta na nsonaazụ ya adịla mma dịka ụdị dị iche iche dịghachiri na ịchụ nta na-enweghị isi nke narị afọ gara aga fọrọ nke nta ka ọ pụọ n'anya ha. Kedu ihe ọzọ bụ isi iyi nke ego, na - eweputa ihe kariri puku mmadu ise na - acho ihe ruru nde euro 240, naanị na Castilla-La Mancha, dika imaatu.
E nwere ụdị ịchụ nta egwuregwu dị iche iche: filats, parany and dog and ferret, counter, silvestrismo, awụgharị, ịgba, na ụta, gburugburu, cowing na ube. Onye obula n’egosiputa uzo di iche iche ichota ma jide anu ochu (onya n’ime osisi, nwu ma obu anumanu dika nkita, nkpuru osisi ma obu nnunu azuru azu maka ebum n’uche a, egbe egbe, mkpuru ahihia).
Na nkenke, nke ahụ bụ ihe njegharị ịchụ nta bụ: anụ oriri, dinta, njem, ebe obibi, adrenalin na veins na ihe egwuregwu. Ma ị na-ehi ụra n'ụlọ ntu dị mfe na-enweghị ụlọ ịsa ahụ, n'ụlọ ụlọ mara mma, na họtel, ala na ụlọ ma ọ bụ n'ogige okomoko n'okpuru kpakpando Africa, mmụọ ịchụ nta oge ochie bụ ihe jikọrọ ndị njem a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Kedu ihe bụ njem ịchụ nta?
Kwesịrị ikpochapụ ismchụ nta njem nlegharị anya ma were ya dị ka mpụ.
Ọ bụ ezigbo iwe na ụdị obi ọjọọ a na-aga n'ihu taa.
Zaghachi iji aka
Ebee ka a hụrụ Iguazu Falls kacha mma: na Brazil ma ọ bụ Argentina?